निर्वाचन खर्च बढ्दै गयो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
निर्वाचन खर्च बढ्दै गयो
सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:३२ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा हालसम्म करिब पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । गत वैशाख ३१ का लागि एकै चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचन बीचमा आएर दुई चरणमा परिणत हुनु र दोस्रो चरणको निर्वाचन पटक पटक सर्न थालेपछि निर्वाचन खर्च झनै बढ्ने देखिएको छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार १६८ रुपियाँ आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार आइतबारसम्म चार अर्ब ७३ करोड ४१ लाख ८५ हजार ६७९ रुपियाँ खर्च भएको छ । विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ । प्रवक्ता शर्माका अनुुुुसार मतपेटिका, मतपत्र छपाइसहितका केही सामग्रीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको अवधि लम्बिएपछि सबैभन्दा बढी खर्च जनशक्ति परिचालनमा हुने देखिएको छ ।
आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले वैशाख ३१ को निर्वाचन जेठ ३१ मा तय भयो र फेरि असार १४ मा सरेपछि मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री र थप जनशक्ति परिचालनबाट केही आर्थिक भार बढेको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनका क्रममा तयार पारिएका निर्वाचन सामग्रीको पुनः उत्पादन, थप उत्पादन र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अरू बढी प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढाइएका कार्यक्रमले निर्वाचनको खर्चमा सामान्य वृद्धि भएको छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई दिइने खर्च भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै हुने भएकाले आयोगको खर्चमा जोडिएको छैन । आयोगले बजेट विनियोजन गर्दा मतपत्र छपाइका लागि १४ करोड रुपियाँ, मतपेटिका खरिद गर्न १० करोड रुपियाँ, मतदाता परिचयपत्र छपाइमा १६ करोड रुपियाँ, मतदाता स्वयंसेवकलाई भत्ता ३३ करोड रुपियाँ, मतदाता शिक्षा पोष्टर छपाइका लागि नौ करोड रुपियाँ, पत्रपत्रिकामा सूचना विज्ञापन प्रकाशन गर्न छ करोड रुपियाँ, मतदाता शिक्षाका लागि ४६ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत,
निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने झोलाको पाँच करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालयलाई निकासा पठाइसकेको छ । ती कार्यालयलाई जेठ मसान्तसम्म दुई अर्ब ६० करोड २७ लाख ५३ हजार २२० रुपियाँ निकासा पठाएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगका क्षेत्रीय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २७ करोड दुई लाख ५९ हजार ७१ रुपियाँ निकासा पठाएको जनाइएको छ । यस्तै आयोगले क्षेत्रीय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जेठको अन्त्यसम्म ४२ लाख ५० हजार रुपियाँ र गृह मन्त्रालयलाई एक करोड २७ लाख ४७ हजार पाँच सय रुपियाँ निकासा पठाएको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हालसम्म भएको ८४ करोड ४१ लाख ७५ हजार ८८८ रुपियाँ खर्चको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
कुल ७४४ स्थानीय तहका लागि जारी निर्वाचनमा ७५ वटा जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६६९ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रकम निकासा भइसकेको छ । पहिलो चरणमा २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएकोमा भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छैन भने अन्य जिल्लाबाट खर्चको विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको छ ।
दोस्रो चरणमा हुने ४६१ वटा स्थानीय तहका लागि पनि आयोगले बजेट निकासा गरिसकेको छ भने जेठ ६ गतेबाट ४३ वटा जिल्ला (रुकुम र नवलपरासीका केही भागसमेत)मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र वैशाख १५ बाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।
निर्वाचन भएका ३४ जिल्लामा निर्वाचन भएको जिल्लाको खर्चको अनुमान गर्दा ४३ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहको मतगणनाका लागि मात्रै करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान आयोगको छ । आयोगले ३४ जिल्लाका लागि करिब ३० करोड रुपियाँ मतगणनाका लागि बजेट निकासा गरेको छ ।
आयोगका अनुसार एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भए निकै कम खर्च हुने थियो । वैशाख ३१ को पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भए असार मसान्तसम्ममा निर्वाचनका सबै कार्य सकिन्थ्यो । अब झन्डै साउन १५ सम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने हुनाले कर्मचारीलाई दिनुपर्ने खाजा, प्रोत्साहन भत्ता, दैनिकभत्ता पनि वृद्धि हुने भएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: दुई बालिकाको रहस्यमय मृत्यु
NEXT POST Next post: हाम्रालाई होइन राम्रालाई मतदान
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १२:३२